MuTestamente Yekare, Marudzi aigara muNyika yeChipikirwa akabviswa zvine hutsinye nemaJuda -- Nekuda kwei?
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » MuTestamente Yekare, Marudzi aigara muNyika yeChipikirwa akabviswa zvine hutsinye nemaJuda -- Nekuda kwei?
MuTestamente Yekare, Marudzi aigara muNyika yeChipikirwa akabviswa zvine hutsinye nemaJuda -- Nekuda kwei?
Vasingatendi vanobvunza kuti, Nei Mwari weTestamente Yekare aive nehutsinye? Akabvisisa marudzi aigara munyika yeChipikirwa. Izvi zvakaitika nekuti Mwari akavenga zvivi uye tine chirwere chikuru pakunzwisisa kwedu pamusoro pezvivi.
Mwari anopomwerwa hutsinye muKenani, asi vanomupomera vakanyarara pamusoro pekupindira kwaakaita kumisa zvakaipa.
Kuipa kukuru uye hutsinye hukuru hwevaKenani kuvana vavo hunofanirawo kutariswa.
Mwari paakasika nyika aida zvisikwa zvaisazowora kana kuguma.
Izvi zvaida hunyanzvi hukuru nekuzvipira kukuru uyezve kuzvininipisa kwakazara pakuita kuda kwaMwari. Muviri wenyu wese unofanira kuzvininipisa kumusoro wenyu. Kuti zvirarame nekusingaperi, zvisikwa zvaMwari zvaifanira kutevera zvakanakisa zano rake uye kuda kwake.
Maziso edu asina rubatsiro haagoni kuona kumuganhu wenyika. Kufunga kwedu ndekwenguva dukuwo sezvo tisingagoni kuona ramangwana. Isu vanhu hatina kuumbwa tichigona kuita chinhu chinorarama nekusingaperi. Chero mafungiro anoita munhu haana kukwanira zvachose muzvikamu izvi zvekuti Mwari haagoni kutendera mifungo yevanhu kuti ipindire, nekukanganisa, hurongwa hwake. Tinofunga kuti takangwara. Asi kana zvichienzaniswa naMwari hatina chatinoziva.
Mwari paakasika nyika pekutanga akazosika munhu pekupedzisira. Izvi akazviita nekuziva. Dai munhu akasvika pekutanga angadai akapawo mazano ake uye zvaanofunga pamusoro pekuti kusika kwaifanira kuitwa sei. Pangadai pakaitika tsaona huru kwazvo.
Chero chinhu chinogadzirwa nevanhu, chinosakara saka chinoda kugadziriswa kana kutsiviwa. Guta guru reBabironi parizvino rangove dongo murenje. Tinoita kuonekera kwenguva duku panyika tobva tanyangarika. Zvese zviri pamusoro pedu zvine miganhu uye ndezvenguva duku.
Rangarirai, Mwari anofunga nezvezvinhu zvenguva refu, Muono mukuru wakadzama, usingagumi.
Zvinhu zvisingagumi zvinoda kuitwa nemazvo. Hapatombodi kuita chero kukanganisa kuduku zvako. Chinhu chimwe nechimwe chinofanira kukwana zvakanaka munzvimbo yachakagadzirirwa. Zviyero zvese hazvina maturo nekuti Mwari ega ndiye anotonga zvinhu zvese. Saka hazvingatoshandi kunze kwekunge ari Mwari anenge achizvishandisa.
Saka chero chinhu chinenge chapindira pakufamba zvakanaka kwehupenyu husingagumi, Mwari anochiparadza. Izvi zvakaipa hongu. Asi kana chivi nekuipa kwacho zvikasabviswa hupenyu husingagumi hunoipiswa inobva yaita tsaona hurusa. Hamuna hupenyu husingagumi muzvivi. Saka zvivi hazvina ramangwana renguva refu. Segomarara, zvinofanira kubviswa.
Ghengis Khani muMongori akatanga hushe hweAsia hukurusa munhorondo mumakore akapoteredza 1200 asi vanhu vanosvika mamiriyoni makumi mana vakafa mukuuraiwa uye muzvirwere nenzara yakazotevera kutangwa kwehushe uhu. Verudzi rwake vakabva kwaari vakazomedzwa nekukasika mutsika dzevaya vaive vatapwa naye. Hushe hwake hwakabva hwapatsanurana kuita mapoka maduku maduku hukaparara. Nhasi Ghengis Khani arere mubwiro risina anoziva uye Mongoria kangori kanyika kaduku kwazvo kasina kana kurudziro yakanako pasi rese.
Izvi hauzi muenzaniso wakanaka kuva nawo kana mukada kufunga nezvehushe hwepasi rese vagari vahwo vane hupenyu husingagumi nerugare pasina rufu, zvirwere, marwadzo kana misodzi.
Hitira aida kuti hushe hwake hweNazi Third Reich hurarame kwemakore 1000. Hwakangorarama kwemakore gumi nemaviri chete.
Isu vanhu hatigoni kuita chimwe chinhu chinorarama kwenguva refu.
Negore 1945 Hitira aive auraya maJuda anosvika 6 miriyoni kuti abvise zvachose maJuda aive asaririra akatekeshera nenyika aive adzingwa nevaRoma kubva muParesitina makore 2000 akadarika, mumashure mekunge Paresitina yakanga yava nyika isina mvura uye isina zvibereko zvaikura mairi.
Asi muna 1948 maJuda akadzokera munyika yavo apa yave kuyevedza nekuita zvibereko seruva nekuti varidzi chaivo vakatora nzvimbo yavo. Nyika iyi yakaita sembwa inotomuka nemufaro panodzoka tenzi wayo.
Saka Mwari wemaJuda kutanga akakurira mamwe marudzi ese. Hakuna rumwe rudzi rwakadzoka kubva parufu rukamutsa chitauro chakanga charasika (chiHeberu) kumashure kwemakore 2000.
Saka Mwari anoziva kuti anoita sei kuti zvinhu zvienderere mberi nyangwe zvakaoma sei. Tinokwanisa kudzidza zvidzidzo zvikuru kubva kwaari.
Mwari akateya nheyo dzake dzehupenyu husingagumi muBhaibheri. Garai neshoko rimwe nerimwe remuKing James Vhezheni. Shoko rimwe nerimwe ramunoshandura chipanera chehupenyu husingagumi uye Mwari anoda kuti hupenyu husingagumi hugare. Haadi kuti hupenyu husingagumi hukanganiswe nemifungo yedu. Anotiyambira kutiburitsa muhurongwa hwake hwehupenyu husingagumi kana tikangoshandura Shoko rake kupfurikidza kuwedzera kana kutapudza sekushandura chero chinhu zvacho mariri.
Kana musingagoni kuturikira Bhaibheri reKing James sezvarakanyora munenge musina zaruriro yekuti Bhaibheri rinorevei.
Mwari haadi kunamatwa nemarobhoti.
Mhuka dzinorarama nemanzwiro akasikwa ari madziri zvichireva kuti dzinoterera murairo wemamiriro ezvinhu nekunze dzokwana mumamiriro ekunze zvekuti dzinokwanisa kurarama kwenguva refu.
Tarirai mhuka, nemasikirwo adzo, dzinorarama nemurairo wemamiriro ezvinhu nekunze anenge aripo panguva iyoyo. Kuterera mirairo yemamiriro ezvinhu nekunze ndiyo kiyi yekurarama munyika nezviri mairi. Majuru, zvinonanaira, nehutachiona, nemakonye zvinoita basa guru mukugadzira ivhu kuti zvese zvinomera nekukura mariri zvigone kutora kudya kwazvo kunovaka miviri kubva mariri. Asi chimwe nechimwe chinofanira kuziva nzvimbo yacho chogara munzvimbo yacho choshandisa simba rachakapihwa naMwari mukubata mumamiriro ezvinhu nekunze. Zvisikwa zvinozvininipisa izvi zvakakosha pakurarama kwedu. Asi zvinoshanda kazhinhi zvisingaonekwe zviri pasi pevhu. Uye zvinogara munzvimbo dzazvakasikirwa naMwari. Zvichiterera kuda kwake nekuti hazvina kuda kwazvo kwazvinoita. Saka mamiriro ezvinhu nekunze akakwanisa kuenderera mberi kwezvuru zvemakore.
Vanhu vakapihwa simba rekusarudza kuita zvavanoda saka hushe hwedu hahurarame kwenguva refu.
Zvisikwa zvepasi pevhu hazvina simba rekusarudza kuita zvazvinoda izvi zvinogonesa nyika nezviri mairi kuenderera mberi mukutenderera kwemamiriro ayo kwese kusingagumi panosimuka hushe hwevanhu huchiwira pasi ingoripo.
Saka dambudziko gurusa rinomisa hupenyu husingagumi kuti huitike isarudzo dzevanhu dzekuita zvavanoda.
Sarudzo dzekuita kuda kwedu ndiye muvengi wedu mukuru.
Saka chero chinosikwa naMwari, kana chichizogara kwenguva refu, chinofanira kuterera mirairo yake.
Kuti chisikwa chisave serobhoti, Mwari anofanira kuchipa mukana wekusarudza kuita zvachinoda.
Asi kuita zvatinoda kune njodzi uye kunoparadza chinhu chinogonesa zvisikwa kuti zvikunde.
Tarisai zvakaitika apo Mwari akakomborera vanhu vaakasika nechipo chesarudzo dzekuita zvavanoda.
Mwari akatanga kusika vanhu vemweya, vanonzi ngirozi, kuDenga kwaive kusina zvivi. Kwaive kusina chaigona kuvarasisa munzira yaMwari. Kwaive kusina zvakaipa. Havaigona kutaura kuti Mwari aivayedza.
Ngirozi huru Rusifa nyamasase, yaiunza mwenje.
Mwari aida kunamatwa mukubwinya kukuru. Saka ngirozi huru yaifanira kuva nekubwinya kuti ikwane panzvimbo payo zvakanaka. Mwari aida kuti zvisikwa zvake zvive zvikuru kwazvo, kwete zvinoshoreka.
Paakakundikana, Rusifa nyamasase akatora hushe hwenyika akatonga zvematongerwo enyika ino. Semukuru wengirozi aive ari mutungamiri wedzimwe ngirozi. Saka paakasvika panyika aive achiri kuda kutungamirira. Saka Bhaibheri rinotaura nezvake samambo weTire. Saka Satani ndiye chakavanzika chinotonga nekukurudzira vanoita nezvematongerwo enyika.
Kutaurwa kweEdeni kunoratidza kuti aive asiri iye chaiye mambo weTire. Rusifa aive mumunda weEdeni apo mweya wake wakamiririrwa nemucherechedzo wemuti wekuziva zvakanaka nezvakaipa.
EZEKIERI 28:12 Mwanakomana womunhu, itira mambo weTire mariro, uti kwaari: Zvanzi naShe JEHOVA: Iwe wokuisa chisimbiso chako pachiyero, uzere novuchenjeri, wakakwana pakunaka.
Rusifa, nyamasase aive mukuru wengirozi. Aive nevuchenjeri hwese uye runako rukuru.
Akasimbiswa. Aiti anoziva zvese, uye zvese zvaive zvakaita sezvakamonerwa pakasiyanwa kake. Ngirozi dzese dzaifanira kutenda zvese zvaaitaura. Dzaifanira kutenda kuti aive asingatadzi. Mweya mumwechete uyu wakatapukira kukereke nhasi mumashure mechinguvana munoguma makutenda kuti kereke yenyu ine chokwadi chakazara, uye haidi kugadziriswa nevanhu vanobva kunze.
Kereke yechinomwe yekupedzisira yeRaodikia inoti yakazvikwanira uye haidi chiro. Haidi kugadziriswa nemumwe munhu.
ZVAKAZARURWA 3:14 Nyorera mutumwa wekereke iri paRaodhikia, uti:
ZVAKAZARURWA 3:17 Nokuti unoti, ndakafuma, ndakafumiswa, handishaiwi chinhu; usingazivi, ....
Tinofunga kuti tinazvo zvese zvakasimbiswa asi hatizivi kuti tiri mudambudziko. Satani akatinyengera sezvaakaita ngirozi pakutanga.
EZEKIERI 28:13 Wakanga uri paEdeni, mumunda waMwari; wakanga wakafukidzwa namabwe anokosha amarudzi ose, anoti, saridhio netopasi nedhaimani neberiri, neonikisi nejasipiri nesafiri nesimaragidhino nekaribhunikuri; ngoma dzako nenyere dzako dzakanga dzakaitwa nendarama mukati mako, zvakagadzirwa nezuva rokusikwa kwako
Nguwo dzaRusifa dzaive dzakafukidzwa nemabwe anokosha nendarama. Hamungafunge pamusoro penguwo dzinobwinya kudarika dzake. Nguvo dzake dzairatidzira pfuma zhinji. Uku ndiko kwaive kuita kukuru kwakamunyengedza kusvika pakuipa kwake. Aive ari pamusoro kwazvo nekuonekera kwake kwaive kwakanakisa. Airatidzika zvinodadisa. Aivewo nechipo kwazvo uye ari muimbi mukuru kwazvo. Nyere nengoma ndizvo midziyo yaishandiswa pakutungamirira kurumbidza Mwari.
EZEKIERI 28:14 Iwe wakanga uri kerubhi rakazodzwa, raifukidzira areka, ndikakugadza ukava pamusoro pegomo dzvene raMwari; waifamba-famba pakati pamabwe omoto.
Rusifa aive pagomo dzvene raMwari, akasimudzirwa pamusoro pevamwe vatumwa vese. Ari nehukuru pamweya. Aive nesimba kwazvo pamusoro pedzimwe ngirozi dzese. Kana zvaive zvengirozi, paive pasina chekuwedzera paari.
Ndiro raive simba raive maari rinoshamisa zvekuti aigona kufamba pamusoro pemabwe anopfuta. Tinoona kuratidzirwa kweizvi zvichiitwa nemaHindu anofamba pamusoro pemoto.
Aive akazodzwa nekuputirwa neMweya Mutsvene waMwari. Kuzodzwa uku kwaibwinya paari semirazvo inopenya. Mwari paaigara pachigaro chake nevatumwa vari pamberi pake, Rusifa aibva amira kumashure kwaMwari. Kubwinya kwaRusifa kwaibva kwafukidza chigaro chehushe paibwinya zvishongo zvake zvichibva kumashure kwechigaro chehushe. Ngirozi dzaive dzisingaoni Rusifa nekuti Mwari haagovani kubwinya kwake neumwe. Vaiona mafungu ekubwinya chete aipararira achifukidza chigaro.
Ndicho chikonzero nei Jesu akati kuna Petro, “Enda shure kwangu, Satani”. Ndiyo yaive nzvimbo yaSatani yekutanga, kumashure kwechigaro chaMwari chehushe.
EZEKIERI 28:15 Wakanga wakakwana panzira dzako kubva pazuva rokusikwa kwako, kusvikira kusarurama kwakawanikwa mukati mako.
Hazvigoneki kuti murangarire imwe ngirozi ingave yakanakisa. Rusifa aive nezvese. Kutadza nebwoni zvinoreva kuti unenge waziva kuti chinhu chakaipa asi wochiita chete zvakadaro.
Uku ndiko kwaive kuparadza kwakavanzwa kwaive musimba rekuzvisarudzira.
Zvisinei nekuti munhu ane zvakawanda sei, anoramba achida zvizhinji. Rusifa aive nezvizhinji kudarika vamwe vatumwa vese asi zvaive zvisina kumukwanira. Chero munhu anosikwa achipihwa zvizhinji anobva aisa ndangariro dzake pakuwana zvimwe zvakawanda futi. Simba rekuzvisarudzira rinoisa kukosha pamunhu pachezvake kana kuti kuita kuda kwako pachako. Kumunhu akasikwa, iye pachake nekuda kwake kunoita kunge mudziyo wekutsvairisa unonzi vakiumu unodhonza zvese zviri mberi kwawo zvichipinda mauri.
Saka kusvika apa Rusifa aive asati aita chakaipa asi Mwari aiziva ndangariro dzake. Aive akasikwa kuti atungamirire kunamatwa nekurumbidzwa kwaMwari. Asi mumashure mechinguva aive akuda kuti kukudzwa kwese nekurumbidzwa kuve kwake, kwete kwaMwari. Izvi zvaive zvakaipa. Mwari akasika vatumwa kuti vamunamate nekumurumbidza, kwete kurumbidza Rusifa.
Sevakuru vemakereke. Mwari anovapa zvipo nemasimba. Ipapo vanobva vatanga kufunga kuti vakakosha. Rusifa, ngirozi yaitungamirira kudenga pakatanga chivi. Vanhu vanosimudzirwa kuti vave vatungamiri vemakereke ndipo panopindira kurudziro yechivi inowodza mukereke.
Jesu naJohane Mubapatidzi vaive vachimhura pese pavaitaura pamusoro pevatungamiri vezvitendero vechiJuda.
EZEKIERI 28:16 Nokuwanda kwokushambadzira kwako vakazadza mukati mako nokuita nesimba, ukatadza; naizvozvo ndakakudzinga pagomo raMwari ndichiti uri chinhu chinomhurwa, ndikakuparadza, iwe kerubhi raifukidzira areka, ndikakubvisa pakati pamabwe omoto.
Kushambadzira. Kuratidzira zvinhu zvekutengesa. Kuti musimudzire huwandu hwekutengwa kwezvinhu nekutengesa kana kuzviisa pazvinoonekwa. Rusifa aishambadza kubwinya kwake iye uye simba rake kungirozi dzaivepo naye kuti awane rumbidzo kubva kwadziri uye kunamatwa. Aizvishambadza sechinhu chinobwinya chekunamata. Mumwe anofanira kuyemurwa. Mumwe anofanira kurumbidzwa nekuda kwezvipo zvaanazvo. Sevanhu vanoonekwa pamafirimu, vaimbi, nevanoita zvemitambo vanozvitutumadza parumbidzo dzevanovafarira. Sevanoita zvematongerwo enyika vanozvikudza musimba ravanaro pamusoro pevanhu vachifara muzvinhu zvavakawana nenzira dzakaipa kupfurikidza huwori.
Rusifa aive asina mhosva yechinhu chaakaita kamwechete kana kukanganisa pakutongera. “Nokuwanda kwekushambadzira kwako”. Ichi chaive chivi chaigarodzokororwa. Mafungiro aRusifa aive akaipa kwenguva refu maitiro ake asati aratidzira ndangariro dzake apo aida kun’oresa dzimwe ngirozi.
Chakaipira chivi chikuru ndechekuti chakafanana nemuchero mumwechete wakawora unokwanisa kuparadzira kuwora kune mimwe michero inenge iri mudengu rimwe nawo. Saka zvivi zvemunhu mumwechete zvinokwanisa kun’oresa vamwe vakamupoteredza.
EZEKIERI 28:17 Moyo wako wakazvikudza nokuda kwokunaka kwako; wakaodza huchenjeri hwako nokuda kwokubwinya kwako; ndakakuwisira pasi, ndakakuisa pamberi pamadzimambo kuti vakuone.
Uyu ndiwo moyo wedambudziko rekuva nekodzero dzekusarudza zvatinoda tega. “Moyo wako wakazvikudza”. Kuzvikudza.
“Ndiri nani kupinda umwe”. Mumwe anotamba mutambo wetsiva akambotaura achiti, “Ndini mukurusa”.
Rusifa aive nerunako, huchenjeri, uye kubwinya nekuziva kukuru.
Asi zvipo zvaaive akapiwa naMwari izvi zvaishandiswa kukudza maonero aaizviita, kwete kubatira Mwari.
VeSainzi nhasi vane huchenjeri vazhinhi vanoziva kwazvo uye vane hukuru panjere. Asi vazhinji vavo vanoshandisa zivo yavo kuti vawane kuteverwa nevasingatendi apo vanopa ‘humbowo” hwekuti hakuna Mwari uye kuti nyika nezviri mairi zvakazvisika asi kutaura uku kuchirwisa mirairo yese yefizikisi inozivikanwa.
Kusika, pachako chipo chakakwana, kunobva paMusiki. Uku ndiko kuita kwakagara kwakadaro kwechivi.
EZEKIERI 28:18 Nokuwanda kwezvakaipa zvako, nokusarurama kwokushambadzira kwako, wakamhura nzvimbo dzako tsvene; naizvozvo ndakabudisa moto mukati mako; wakakupedza, ndikakushandura ukava madota panyika pamberi pavose vanokuona.
“Kusarurama kwekushambadzira” kunoyanana nekutengesa kana kuzviitira zvinhu mukuparidza mazano kana zvitendero zvisina kururama.
Rusifa aive mutungamiri wengirozi.
Mutungamiri wega wega wekereke muparidzi akanaka kana kuti muurai weShoko raMwari zvichienderana nezvaanoparidza. Muparidzi akanaka anotenda kuti zvaanoparidza zvinofanira kubata pakubatsira vanhu mune zvakanaka nekuti anoparidza Shoko raMwari chete, kwete zvaanofunga iye. Muparidzi akaipa anoparidza zvinodiwa nesangano rake nekuti chinzvimbo chake nemari yake zvinobva pane zvaanotenderana nazvo. Kuzviwanira pfuma kunorarama musangano rezvechitendero iroro chete. Semunhu wezvematongerwo enyika, haana mazano ake iye ega asi anofanira kuzvininipisa kune zvinotendwa neungano.
Saka Rusifa, nemazano ake akanakisa, akafuratidza ngirozi zhinji kubva kuna Mwari vakabva vatanga kumutevera. MaKristu nhasi vanotevera mapasita avo avanoda.
Jesu akataura izvi:
RUKA 10:18 Akati kwavari: Ndakavona Satani achiwa kudenga semheni,
Kodzero dzekuzvisarudzira dzakaitisa ngirozi ine chipo chikuru uye yakanakisa kuti ivodze mafungiro ayo uye kuti irasise dzimwe ngirozi kusvika dzabvisa meso adzo pana Mwari kuti dziyemure Rusifa.
Kutadza kwekutanga kwaive kudenga. Rusifa nedzimwe ngirozi zhinji vakawira pasi kubva kudenga vachipinda mugomba regehena.
Mukuita uku vakatukwa pavakashandurwa kubva pakuva ngirozi kuitwa madhimoni. Satani akabva aitwa Satani.
Asi paive pasina imwe nzira yekuti vaponeswe. Vaive ngirozi zvinoreva kuti vaive mweya yaive mumiviri yemweya. Mweya yavo yakatukwa ikashandurwa kuitwa madhimoni apa vakurarama mumiviri yakaipa uye yakatukwa yemadhimoni munzvimbo dzemweya.
Nyika yaive yakasikwa muzvikamu zvitatu, hurefu, hupamhi, uye hudzamu.
Kuti paitwe torongo yaSatani nemadhimoni ake, Mwari akazoita nzvimbo yechina kuitira mweya yakarasika iyi. Rimwe zuva vachatongerwa kuipa kwekuita kwavo voparadzwa mudziva remoto.
Saka nzvimbo yechina hairarame nekusingagumi. Iri pasi penguva. Saka Mwari akasika nguva senzvimbo yechina inogarwa nemweya yakaipa.
Vezvesainzi vanoziva kuti kune nzvimbo yechina isingaonekwe muzvikamu zvenguva. Asi sainzi dzezvinobatika hadzigoni kuona mweya yakarasika iri munzvimbo yechina. Vesainzi havazivi kuti nguva chii. Vanogona kuyera kufamba kwechinongedzo pachiso chechiringazuva, asi havagoni kuyera nguva.
Hakuna humbowo hunobatika hwenzvimbo yechishanu.
Fungai nezveDenga senzvimbo yechitanhatu iri kure kwezvese zvingarangarirwe nevanhu. Zvino nzvimbo yechishanu inova nzvimbo inoparadzanisa Denga nehadhesi.
Kana muKristu akaponeswa akafa akapinda Denga anenge ave muzororo rakanakisa nekuti madhimoni haagoni kudarika muganhu wenzvimbo yechishanu kuti anomutambudza.
ISAYA 14:12 "Haiwa, wawa seiko uchibva kudenga, iwe nyamasase, iwe mwanakomana wamambakwedza! Wakandwa seiko pasi, iwe wokuwisira marudzi pasi!
Kuwa kwekutanga kwaibva kudenga.
ISAYA 14:13 Iwe wakati mumoyo mako, `Ndichakwira kudenga, ndichakwiridza chigaro changu choushe kumusoro kwenyeredzi dzaMwari; ndichagara pamusoro pegomo reungano, pamigumo yamativi okumusoro.
14 Ndichakwira kumusoro kwamakore, ndichazvienzanisa noWokumusoro-soro.'
Tarisai kudzokororwa kwakaitwa “ndi”. Rusifa aive akazadzwa nekuzvikudza. Aive atove mutumwa wepamusoro kare asi zvaive zvisina kukwana kwaari. Aida chimwe chinhu chepamusoro-soro. Kuzvikoshesa kwakapedzisira kwamuita kuti anzwe kunge aive akangofanana naMwari. Mwari ainamatwa. Rusifa aidawo kuyemurwa nekunamatwa.
Kuzvikudza kunouya kuwira pasi kusati kwasvika.
Akasimudzirwa nekuzvikudza kwake, akawira pasi.
Iyi yaiva njodzi. Kana mweya ukawira muzvivi, hakuna imwe nzira yekudzokera shure. Unoramba uchienderera mberi kutadza nekukurudzira vamwe kutadza.
Satani akabva aita kuti Eva atadze. Adamu aimuda kwazvo zvekuti akatadzawo kuti arambe anaye.
Jesu anoda kereke yake zvakanyanya zvekuti akava chivi kuti aiponese ave nayo.
Adamu aivimba naMwari kuti aizowana nzira yekuvadzikinura. Mwari aigamuchira ropa rakadeurwa kubva pamhuka isina chivi semuripo wezvivi.
Chivi chaive chapinda panyika. Kaini akanyepera Mwari akauraya Aberi. Munhu aive ananga kumawere nenhema nehumhondi.
Vanhu vakaramba vachiwedzera kuipa. Mwari akatsvaga vanhu vaida kumubatira asi akawana Noa chete.
GENESISI 6:3 Ipapo Jehovha akati, "Mweya wangu haungarambi uchigara mumunhu nokusingaperi, zvaari wenya­mawo hake; naizvozvo mazuva ake achava makore ane zana namakumi ma­viri."
Zvisinei nezvivi zvavo Mwari akavapa makore zana nemakumi maviri asati aisa mutongo wake. Asi hazvina kuvashandura hunhu hwavo.
GENESISI 6:5 Zvino JEHOVA wakaona kuti kuipa kwavanhu kwakanga kuri kukuru panyika, nendangariro dzokufunga kwe­moyo yavo dzakanga dzakaipa bedzi nguva dzose
Zvivi zvakavodza mafungiro erudzi rwevanhu. Mifungo yakaipa yakabereka zviito zvakaipa.
Saka zvivi zvakavodza rudzi rwevanhu. Vanhu vazhinji vakaramba Mwari. Asi Noa akashandira Mwari semuenzaniso vanhu vakamuramba.
Rimwe dambudziko rechivi nderekuti chinoita kuti vanhu varambe vaya vanoshandira Mwari.
GENESIS 6:11 Nyika yakanga yakaora pamberi paMwari, nyika yakanga izere nokumani­kidzana.
12 Mwari akaona nyika kuti yakaora; nokuti vanhu vose vakanga vaodza mufambiro wavo panyika.
Zvivi zvakabereka kurwisana nekuvora. Rudzi rwevanhu rwaive rwakanganwa kuti ino yaive nyika yaMwari. Kurwa nehuwori hazvigari kwenguva refu. Mweya waKaini, rudo rwekuuraya, rwakaramba rwuri murudzi rwevanhu rwuzere zvivi. Hadzisi nheyo dzehupenyu husingagumi.
Mwari akabva atsamwa nekukura kwezvivi. Akatumira Muvura zhinji yakaparadza vanhu vese. Noa aive avayambira kwemakore zana nemakumi maviri asi vakaramba zvaaitaura.
Kuita kwechivi ndekwekuramba zvinotaurwa naMwari. Asi Mwari anovenga zvivi pakupedzisira kutsungirira kwake kunopera.
Apo vanhu vakazara zvivi varinekodzero dzekuzvisarudzira vanosarudza zvakaipa nemufaro mukuru, kunyange pavakasarudza mhondi Baraba pachinzvimbo chaJesu.
Mwari akabva asarudza munhu mumwechete Abrahama akamupa nyika yechipikirwa yeIsraeri kuitira vana vake, maJuda. Asi Mwari aizovaitirawo Mirairo kuti idzore nekuraira hunhu hwevanhu.
DEUTERONOMIO 9:5 Haupindi munyika yavo, ive yako, nokuda kwokururama kwako, kana nokuda kwokururama kwomoyo wako; asi JEHOVA Mwari wako unodzinga ndudzi idzi pamberi pako nokuda kwokuipa kwavo, uye kuti asimbise shoko rakapikirwa madzibaba ako naJEHOVA , kuna Abhurahamu, nokuna Isaka, nokuna Jakobho.
MaJuda vaive vasiri vese mienzaniso yezvakanaka, asi marudzi avaizobvisa vainyangadza. Saka Mwari aiita zvinhu zviviri.
SepaMvura yaNoa, aizobvisa vatadzi vakaita sevaKenani nevaAmoraiti. Pamusoro pazvose inyika yaMwari. Kana mukanditendera kupinda mumba menyu, ndinenge ndichifanira kuzvibata ndoita hunhu hwakanaka.
MaJuda aizodzidzawo chidzidzo chakakosha. Kana Mwari akabvisa vatadzi ava kuti aitire maJuda musha, kana maJuda akatadzawo vaizotarisira kuti Mwari avabvisewo.
DEUTERONOMIO 18:9 "Zvino kana wasvika munyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako, usadzidza kutevera zvinonyangadza zvendudzi idzo.
Vanhu vaigara munyika yechipikirwa vaive vakasaririra. Vaive vasina kudzidza chidzidzo cheMvura yaNoa. Maguta avo makuru aive Sodoma neGomora uye aive madziva ezvakaipa mumazuva aAbrahama Mwari asati avaparadza.
MaJuda vaisafanira kutevedzera tsika dzevahedeni echipegani.
Chinhu chakakosha cheyambiro. Mambo weRoma yechipegani Aurelian mugore 274 AD akaita 25 Zvita zuva rakazvarwa mwari wezuva (sun god). Bhishopu weRoma akabva ariita zuva rakazvarwa Mwanakomana waMwari (Son of God) makore akapoteredza 350 AD. Masi yeRoman Catholic kana kuti mhemberero dzavo dzakabva dzatangwa, dzaidaidzwa kuti Kirisimasi. Nekukasika izvi zvakashandurwa kuitwa Kisimusi zvikasanganisa muti wakamiswa wechipegani waive wakashongedzwa nendarama nesirveri. Jeremia Chitsauko 10 rinotiyambira kuti tisatevere tsika dzevanhu.
JEREMIA 10:2 Zvanzi naJehovha, "Regai kudzidza tsika dzamarudzi avanhu, musavhunduswa nezviratidzo zvokudenga; nokuti marudzi avanhu anovhunduswa nazvo.
3 Nokuti tsika dzavanhu hadzina maturo; nokuti mumwe unotema muti mudondo, riri basa ramaoko omunhu unoveza nedemo.
4 Vanoushongedza nesirivha nendarama, vanourovera nembambo nenyundo, kuti urege kuzununguka.
5 Zvakafanana nembiru dzakavezwa, dzisingatauri;
Iri rakagara riri dambudziko rezvivi. Pachinzvimbo chekubvisa zvitendero zvevapegani, vakarurama vakazvitambira vakadzigadzirisa kuti dzivaitire.
Hapana muShoko rakanyorwa muBhaibheri panonzi maKristu apemberere kuzvarwa kwaJesu.
Asi tsika dzevanhu idzi dzakasimba kwazvo uye tsika dzeRoma yechipegani dzekupanana zvipo muna Zvita, dzinonzi neveCatholic vazivi vakauya kuchidyiro kuzopa zvipo kuna Jesu. Vakabuda muCatholic vakatevedzera mai vavo vemakereke mukutadza uku, zvisinei nekuti Bhaibheri rinoti vazivi vakapinda mumba vakaona mwana aive asisiri rusvava.
MATEO 2:11 Vakapinda mumba, vakawana Mwana naMaria mai vake, vakawira pasi vakamunamata, vakasunungura fuma yavo, vakamupa zvipo zvendarama, nezvinonhuwira nemura.
Kubva pakutanga Mwari akaona kuti chokwadi nechakaipa zvikasanganiswa, chakaipa chinoipisa chokwadi.
Saka Munyika yechipikirwa, Mwari aida kupa maJuda kutanga kutsva nekubvisa kuipa kwaive nevaKenani kwainyangadza.
VaKenani vaiziva nezvekutonga kwaMwari pamusoro pemaguta eSodoma neGomora mumazuva aAbrahama paakavaparadza vose varume, vakadzi nevana. Vaiziva nemuenzaniso wekururama kwaAbrahama wavakatuka vakaramba.
Asi Mwari akatendera mamwe mazera matatu kuti adarike asati avaparadza. Vaive nenguva yakawandisa kuti vashanduke vatendeuke, asi sevatadzi vaive vasina rudo zvachose kuita saizvozvo. Vakasarudza kunyura zvakadzama muzvivi.
Deuteronomio 12:31 Usaitira JEHOVA Mwari wako saizvozvo; nokuti ivo vakaitira vamwari vavo zvose zvinonyangadza JEHOVA, nezvaanovenga; nokuti kunyange vanakomana vavo navanasikana vavo vanovapisira vamwari vavo pamoto.
Moreki aive mumwe wevamwari vavo naBaari aive mwari wavo wezuva. Chiumbwa chechimwari Moreki chaive nemoto mukuru pamberi pacho. Vabereki vaikandira vana vavo mumoto uyu kuti vaitirwe zvakanaka naMoreki.
Kunamata Baari kwaisanganisa kuitwa kwehupombwe. Chero vakadzi vakazvibata vaitarisirwa kubata sezvifeve zvemutembere. Kubaira vanhu sezvipo, kunyanya vana vematangwe, zvaive zvichiitwa kufadza Baari. Dzimwe nhengo dzemiviri yevanhu vaiurairwa zvibairo ava dzaidyiwa. KuKenani vainamata Baari nekudya nyama yevanhu vachidaidzwa kuti Can-ni-Baari zvakazonzi Kanibari nekufamba kwenguva.
Hunhu hwevaKenani hungadai husina kuwedzera kuipa nenguva yavakaparadzwa nemaJuda.
JEREMIA 19:5 Vakavaka nzvimbo dzakakwirira dzaBaari, kuti vapisire Baari vanakomana vavo pamoto zvive zvipiriso zvinomupisirwa; izvo, zvandisina kuvaraira, kana kuzvitaura, zvandisina kufunga mumoyo mangu.'
Zvisinei nezvakaitika pakaparadzwa Sodoma nemoto, vanhu vaive muNyika yechipikirwa vakaenderera mberi nezvivi zvimwechete izvi.
REVITIKO 18:22 Usavata nomurume sezvinovatwa nomukadzi; zvinonyangadza.
23 Usavata nechipfuwo chipi nechipi kuti uzvisvibise nacho; nomukadzi ngaarege kumira pamberi pechipfuwo kuti akwirwe nacho; zvinonyangadza kwazvo.
24 "Regai kuzvisvibisa kune chinhu chimwe chaizvozvi; nokuti vahedheni vakasvibiswa nezvinhu izvi zvose, ivo vandakadzinga pamberi penyu;
Sekupararira kwakaita zvivi sechirwere chinotapuriranwa, vakabva vadzikira zvakanyanya nekutanga kurara nezvipfuwo.
Vaive vakaipa kudarika vanhu vemuSodoma. Uye vanhu vemuSodoma vaive vakaipa kwazvo.
GENESISI 18:20 Ipapo JEHOVA akati, "Kudanidzira kweSodoma neGomora kukuru kwazvo; zvirokwazvo zvivi zvavo zvakaipa kwa­zvo;
Mwari akatendera kuti aizorega Sodoma kana Abrahama akawana vanhu gumi vaive vakarurama muguta guru iroro. Asi chero ivavo vose vaive vazhinji kuti vawanikwemo.
Ndicho chikonzero nei zvivi zvakabudirira kwazvo nekuti zvivi zvine mbiri. Vanhu musimba ravo rekuzvisarudzira vanosarudza zvivi pane kururama.
VaKenani havaigona kutaura kuti vaisaziva pamusoro pekutonga kwaMwari nekuda kwezvivi.
Vaive vanzwa pamusoro pesimba raMwari paakamedza hondo huru yaFaro muGungwa Dzvuku. Vaiziva kuti kutongwa kwaiuya nekuti Mwari aive aparadza madzimambo aive aedza kumisa Mosesi pakufamba kwake kuenda kuNyika yeChipikirwa. Asi havana kubvira vatsvaga kutendevuka pakuipa kwavo.
Kunyange mumashure mekuwira pasi kwemasvingo eJeriko Rahabu chifeve nemhuri yake vakaponeswa, vanhu veKenani vakaramba vachiramba maJuda pachinzvimbo chekutendeukira kuna Mwari sezvaive zvaitwa naRahabu.
VaKenani nekunyangadza kwavo vakava vanyangadzi pachavo.
Vaive ndivo vaizowodza vamwe. Segomarara, vaida kuchekwa vobviswa. Chero chidimbu chiduku kwazvo chegomarara chinofanira kubviswa kana kuti chinozopararira. Vaive vawodza vana vavo.
Vana vechiJuda, kupfurikidza vavaitamba navo vaizowodzwa.
DEUTERONOMIO 7:1 "Zvino kana JEHOVA Mwari akupinza munyika maunoenda, kuiita yako, akadzinga ndudzi zhinji pamberi pako, dzinoti: vaHeti, navaGirigashi, navaAmori, navaKenani, navaPerezi, navaHivhi, navaJebhusi, ndudzi nomwe dzinokukunda noukuru nesimba;
2 Kana JEHOVA Mwari wako akavaisa mumaoko ako, ukavakunda, iwe unofanira kuvaparadza chose; haufaniri kuita sungano navo, kana kuvanzwira nyasha;
Chivi chakafanana nenyama ine hurwere, inoda kuchekwa yobviswa isati yaipisa muviri wese. Hapana kuzvisimbisa kuti kagomarara kaduku. Nekuti chero gomarara duku rakaipa. Kana mukaripa nguva yekukura.
3 Musawanana navo, usapa mwanakomana wake mwanasikana wako, kana kutorera mwanakomana wako mwanasikana wake.
Hatifaniri kuyanana nezvivi. Zvakaipa. Mvura inoyerera ichidzika kumateru uye zviri nyore kumaburuuru kuti adzike pane kukwidza nerwizi. “kuerera nezvinoyerera zvichienda” ndiko kuita kwevanhu. Asi zvinoyerera zvichienda zvagara zvinonanga kumawere.
4 Nokuti uchatsausa mwanakomana wako arege kunditevera, kuti ashumire vamwe vamwari; naizvozvo JEHOVA achakutsamwirai kwazvo, akakurumidza kukuparadza.
Zvivi zvinowodza vana vako zviri nyore.
5 Asi ndizvo zvamunofanira kuvaitira: Munofanira kuputsa atari dzavo, nokuputsanya shongwe dzavo, nokutema matanda avo avanonamata nawo, nokupisa mifananidzo yavo
Tinofanira kurarama tisina chekuita nezvivi. Kuputa. Kunwa. Kupika. Zvemifananidzo yevanhu vakashama. Majee akaipa. Kutamba njuga. Kana kunyengera. Nezvimwe zvakadaro.
Izvi zvinofanira kuchekwa kubva muhupenyu hwedu.
6 Nokuti uri rudzi rutsvene kuna JEHOVA Mwari wako; JEHOVA Mwari wako wakakutsaura kuti uve rudzi rwake chairwo pakati pendudzi dzose dziri panyika dzose.
Kana tichida kuti Mwari atisarudze kumushandira, tinofanira kuda kushandira Mwari. ChiKristu hakasi kabasa kenguva duku. Hausi mutambo wamunogona kurega.
Chiremba anoda banga rakachena kwazvo kuti acheke gomarara rinenge richida kukura zvaro uye haazodi zvachose kuti paite hutachiona kana apedza. Mwari anoshanda nenzira yakadaro akatarisana nezvivi. Haatenderi kachivi kana kaduku duku. Nekuti chivi chinokura.
GENESISI 15:16 Rudzi rwechina ru­chadzokera pano, nokuti kusarurama kwavaAmori kuchigere kuzara."
Mwari akavapa mazera mana kuti vanatse kuita kwavo. Asi vakatowedzera kuipa pakuita kwavo. Kuipa kwavo kwavaive vanako kwaive kwakakura kwazvo zvekuti Mwari aive asisade huvepo hwavo munyika iyoyo. Vakanga vakanganwa kuti aive Mwari aive akaita nyika iyoyo saka yaive nyika yaMwari.
VaKenani vaive nekupupura kwaAbrahama nearitari yake asi vakasarudza vamwari vavo. Vakagara mukutadza kwavo vakaramba kushanduka uye vaizorasisa maJuda mazhinji dai vakaramba varipo.
Kunamata kwavo kwechipegani kwaive kusina kuipa chete, kwaive kuchizoipisa vamwe zvakanyanya.
Mwari paakabvisa kuipa kwavo panyika, akaitira rudzi rwevanhu zvakanaka.
Mirairo yefizikisi, sesimba rekudonha, yakaipa kwazvo. Darikirai kutsika pachinhu chiri padenga mukadonha munofa. Kunyange mukatsika zvetsaona. Kunyange mukazviita muchida kubatsira mumwe munhu.
Mirairo yedu yemamiriro ezvinhu yakaiswa naMwari (veSainzi havagoni kutsanangura kuti mirairo yefizikisi yakabva kupi) saka nyika nezvairi inokwanisa kushanda nekuchengeta hupenyu mairi.
Zvinhu zvizhinji zvinofanira kuva zvakaringana kwazvo kuti izvi zviitike. VeSainzi havagoni kutsanangura kuti kuringana kwese ikoko kunobvepi. Nyika yedu, masimba edu, nenzvimbo dzedu, nemiviri yedu zvakaitwa nekutya kukuru uye zvakanakisa. Zvakadaro zvese ndezvaMwari. Isu tinongorarama mazviri.
Asi mirairo yaMwari munezvesainzi inofanira kutererwa. Kutyora murairo kunounza mubairo werufu.
Kune murairo unoti kana mukatyaira muchimhanya kwazvo, kana chimwe chinhu chikaenda nenzira isiyo mukumhanya kwakanyanya munofa. Kumhanya nemotokari kunouraya. Uyu murairo usina tsitsi wakagurira hupenyu hwevazhinji panzira.
James Dean mutambi wemafirimu ane mbiri akayambirwa nemumwe mutambi aive akura Alec Guinness kuti asatyaire motokari yake itsva yaive yakagadzirwa nenzira yemotokari dzemujahwo. Akafuratira yambiro pasina vhiki aive afira munjodzi yemumugwagwa. Mbiri yaive yamupa mari. Mari yakamutengera motokari inomhanya kwazvo. Kumhanya kwakanyanya nemotokari kwakamutorera hupenyu neimwe nzira.
Saka mirairo yakaitirwa kuti itichengetedze tiri vapenyu kana tikatyora imwe mirairo tinenge tichizviparadza.
Kana muchiwira muzvivi, mirairo yaMwari haina tsitsi sezvine murairo wekudonha kana chinhu chichiwira pasi kubva padenga.
Nezuva rauchaudya uchafa.
Saka murairo wezvivi wakajeka uye wakaomarara. Kana mukaita chivi munofa.
Munokwanisa kufa muri vaduku kana pakati nepakati, kana kuti machembera asi muchafa.
Mwari haashanduri mirairo yemamiriro ezvinhu kuti ifambirane nehunhu hwedu. Tinofanira kushandura hunhu hwedu kuti huenderane nemirairo yemamiriro ezvinhu. Kuna Tichida kuramba tiri vapenyu.
Mwari anoburitsa pachena kuti haadi zvivi zvachose kana nepaduku zvapo. Mwari akavenga zvivi. Mwari aida kusika rudzi rwevanhu rwune hupenyu husingagumi nemufaro usingagumi. Asi chivi chakamanikidzira kuziviswa kwerufu nekuti muzvivi hamuna hupenyu husingagumi. Rufu rwakaita semumvuri wakabatanidzwa nezvivi, wakamirira mukana wekupindira. Munhu akazivisa rufu paakasarudza kutadza, saka akabva azvipatsanura kubva kuhupenyu husingagumi.
Zvivi nerufu hazvigoni kupatsanurwa. Asi ruzhinji rwerudzi rwevanhu, nekuda kwekodzero dzekuzvisarudzira, rwakasarudza kuenderera mberi nekutadza vanozoripira zvivi zvavo kana vafa.
MuTestamente Yekare vanhu vaitakura zvivi zvavo pese pavaive vari. Saka Mwari aivaona sevatadzi, vaive vakafanira rufu.
Asi Mwari akavapa mukana. Vaikwanisa kutendeuka vouraya mhuka isina mhosva kuti itore nzvimbo yavo. Chimwe chinhu chaifanira kufa nekuti rufu rwewakarurama chete ndirwo rwunogona kuripira zvivi. Ndiko kukura kwakaita zvivi.
Vanhu vanorarama nekuuraya mhuka kuti vadye. Ndiko kuipa kwakaita hupenyu hwevanhu huzere zvivi. Mhuka inofanira kufa kuti muviri wemunhu urambe uri mupenyu. Asi chero ihwohwo hupenyu hwenguva duku sezvo kazhinji tinofa tisati tasvika makore zana.
Saka mhuka dzemuTestamente yekare dzaibairwa kuitira zvivi zvevanhu dzairipira zvivi zvenguva duku. MaJuda aifanira kuramba achipira nekubaira mhuka nekuti vairamba vachitadza. Tinoda kwazvo Testamente Itsva sezvo kuine zano rakanaka rekubvisa zvivi.
Hupenyu hwaive mumhuka dzaibairwa hwaive husingakwanisi kudzoka muvatendi veTestamente Yekare huchivaita vanhu vari nani.
Saka vatadzi vechipegani vaive vanhu vakasaririra kwazvo. Uye maJuda vaive vanhu vakaita kunge vehondo uye vaive nehutsinye dzimwe nguva. Mutadzi akaipa aingofanira kuuraiwa. Ndiyo yega yaive nzira yekuisira chivi muganhu.
Gomarara rinongofanira kuchekwa richibviswa. Ndiyo yega nzira yekumisa kupararira kwaro.
Izvozvi ngatitarisisei dambudziko guru rine vanhu vanotadza.
Tinongofunga nezvedu isu chete, makaro, tinozvikudza, tinozvitutumadza, hatina maturo, tinoita ganyabvu kana zvichitiitira isu, uye zvinangwa zvedu ndezvekuzviwanira ndizvo zvinotonga kufunga kwedu nezvimwe zvakadaro.
Tinokwanisawo kuva netsitsi, takadzikama, tichishamwaridzana nevamwe asi kazhinji zvakanaka zvatinoita zvinokurudzirwa nekuda kuzviwanira chimwe chinhu.
Saka vanhu havapisi kana kutonhora vangori musanganiswa wezvakanaka nezvakaipa.
Kazhinji tinobatira Mwari kuti tiwane mubairo wekukwira kudenga. Kakawanda tinobatira Mwari kuti tipunyuke kumurango wehadhesi. Tarirai kuti kuzviwanira pfuma kunotonga sei ndangariro dzedu. Tinenge tichida mubairo kana kupunyuka kubva pamurango wedu. (Tinongobatsira vanoshaya kana tikawana tikiti rerotari rinotipa mukana wekuhwina chimwe chinhu chakakosha).
Hatingobatiri Mwari nekuti tinomuda, zvisinei nezvinoitika kwatiri. Tinoda kuona mubairo kubva pakutenda kwedu. Kuda zvinhu ndiyo nzira yedu yekuwira pasi.
Mai vaJakobo naJohane vakataura naJesu.
MATEO 20:21 Akati kwavari: Munotsvakeiko? Vakati kwaari: Rairai kuti vanakomana vangu ava vaviri vagare, mumwe kuruvoko rwenyu rworudyi, mumwe kuruboshwe, muvushe hwenyu.
Jakobo naJohane, varume vaviri vakanaka. Vaida kuva ndivo vadzidzi vaviri vepamusoro -soro kudenga. Saka kwavari kungopinda Denga kwaive kusina kuvakwanira. Vaida kuitwa vanhu vakakoshesesa ikoko. ChiKristu chemakwikwi chakabva chaberekwa. Kereke yangu iri nani kupinda yako. Ndiri muKristu ari nani kupinda iwe. Mwari anondida kudarika kuda kwaanoita iwe. Isu vanhu takaoma pachokwadi. Hatigutsikani zvachose, tinogara tiri nemakaro ekuda kuwana zvakawanda.
Sevara panguvo yakachena, hunhu hwevanhu hwakaipa ndihwo hunonyanya kubata kudarika kubata kwezvakanaka zvedu. Kana tikapimwa pachiyero chaMwari kuzvida nemakaro edu zvinokurira zvakanaka zvedu pahuremu hwazvo.
Rudzi rwemapegani rweTestamente Yekare rwaive nemararamiro ainyangadza kazhinji kacho.
Vakadzi vechiGiriki, zvisinei nekuti vairemekedzeka zvakadii, vaitarisirwa kuti vape imwe nguva yavo nekuita kwavo zvifeve zvemutembere.
Nhorondo yemaGiriki yakazara kurwisana pachavo nekunyengera. Kuvimba nemuGiriki chaive chinhu chakaipa kwazvo. Leonidasi, nevanhu vake 300 veSpatani nekumira kwavo kwemazuva matatu kwakaita mbiri paThermopylae vakangosiiwa varipo nemamwe maGiriki.
Kushaiwa hunhu kwaive kwakatokosha. MaGiriki vaiita chingochani vachibata vakadzi vechiPesia chibharo kuti vapinde muhushe hwePesia.
Moreki aive Mwari munyika dzeMiddle East ainamatwa nevabereki vachikandira vana vavo vapenyu mumoto waibvira paari.
Kuverenga kuzhinji kwamunoita pamusoro pehupenyu hwemaPegani eTestamente yekare, ndiko kuwedzerawo kunoita kunyangadzwa navo kwamunoita.
Hafu yekutanga yekuratidzira kwaAlexander achipinda muPersia yaidakadza apo maGiriki vakakurira vaPersia. Hafu yechipiri yaitonyangadza. Nekuda kwekudhakwa akauraya shamwari yake Cleitus, aive ambomuraramisa muhondo yekutanga. Akakunda Afghanistan nekuda kwekunatswa kwevasingatendi. Mauto vaipararira vachifamba kwemazuva vachiuraya varume, vakadzi, vana nemhuka kusvikira pasisina chasara.
Asi tinomudaidza kuti Alexander the Great nanhasi. Sekunge akaita chimwe chinhu chikuru muAfghanistan.
Asi hapana chati chashanduka muhunhu hwevanhu.
Pakati pegore 1979 na 1989 veSoviet Russia vakapamba vakauraya vanhu vekuAfghanstan miriyoni rimwechete. Pakabva veSoviet marudzi ekuAfghan akasiyana akabva atanga kuurayana muhondo yemarudzi yaive yakaipa kwazvo ndufu dzikawanda kusvika mazana ezviuru. Kubva pakupambwa kwakaitwa Afghanistan neAmerica muna 2001 vamwe vanhu zana rezviuru vekuAfghanstan vaive vauraiwa. Kuuraiwa kwevanhu kuAfghanistan kuri kurukirirwa mujira renhorondo.
Saka rudo rwekuuraya runongopararira kubva kuzera rimwechete kuenda kune rimwe. Tinoda kuti Mwari ashande nesu mutsitsi panenge pachikura humhondi uye kuipa kuchipararira. VeRussia vakanyengera kuti tumabhomba tuduku twepasi twaive zvekutambisa zvevana kuitira kuti tuputike patwainhongwa nevana vekuAfghanstan vaive varombo vasina zvekutambisa.
Kunyange zvakadaro, kuuraya vana vemaPegani chinhu chakaoma kutsanangura.
Asi kuuraya vana chiitiko chemazuva edu atiri kurarama zvakare. Muna 1932 Japani yakatanga hondo yakazara muManchuria vachidonhedza mabhomba mumaguta nemumaruwa. Zano iroro rakapararira mumarudzi ese. Varume, vakadzi, nevana vachifa. Vanhu vanosvika hafu yemiriyoni vakauraiwa muSiria muhondo dzemarudzi kubva muna 2011 apo maguta akashandurwa kuitwa matongo ndege dzehondo dzinodonhedza mabhomba akazara nemagasi akaipa ane kirorini pamusoro pevarume, vakadzi, nevana vanenge vari pasi. Rimwechete remabhomba eatomi akadonhedzwa muJapani rakaputika mamita anosvika 700 pamusoro pechipatara rikaparadza varwere, vashandi vemuchipatara, nevaive vakarindira kuita vana.
Kushungurudzwa kwevakadzi nevana kunotaurwa zvakanyanya munhau. Kuita kunonyangadza uku kunongoratidza kuti hunhu hwekutadza hausati hwashanduka. Vatadzi nhasi vakangoipa sezvavaive mumazuva akare.
Saka Testamente Yekare ndiyo yambiro kwatiri.
Mwari akavimbisa hondo yakazara pazvivi akaparadza kunyange vana muKenani.
Saka kana Mwari akavimbisa hondo yakazara pazvivi munguva yeKutambudzika achaparadzawo varume vakadzi nevana.
Sezvazvaive mumazuva aNoa. Vose vakafa kunze kwevanhu vasere chete.
Sezvazvaive pamazuva aRoti. Vose vakafa muSodhoma nemaguta akapoteredza Sodhoma, kukasiiwa vanhu vatatu.
Amagedhoni richava dziva reropa apo ropa richaerera kwemamaira mazana maviri. Mumashure maizvozvo tichaziva kuti Mwari akavenga zvivi.
Asi rangarirai zvakare kuti kuita kwemirairo yemaJuda eTestamente Yekare kunofanira kupimwa nemamiriro ezvinhu enguva iyoyo. Mwari aivaburitsa muchipegani chaive chakan’ora uye chakatsauswa. Saka Mwari akatonga mapegani nekuita kwehutsinye hwavo ivo. Mapegani aive muKenani aiuraya vana vavo. Vaive makanibhari. Vaive vasina hunhu kana tasvika panyaya dzepabonde, zvainyangadza zvakadaro.
Ndizvo zviri vanhu kuti vanowedzere kuipa pachinzvimbo chekuita nani. Saka maJuda, pavakange vapinda muNyika yeChipikirwa, vakatangawo kunonga tsika dzekunamata vachiuraya vana dzaiitwa nemapegani. Vabereki vainamata mwari ainzi Moreki kupfurikidza kukandira vana vano vapenyu mumoto.
Saka kana muJuda akauraya mwana wemupegani nemunondo, hwaive hutsinye pachokwadi asi rwaive rufu rune tsitsi pane kuti mwana iyeye apiswe ari mupenyu nevabereki vake.
MaKristu nhasi vakatorwawo moyo yavo netsika dzechipegani. Mwari haana kubvira atiti tipemberere kuzvarwa kwaJesu. Asi kereke yakasarudza zuva rechipegani remusi wa 25 Zvita kuti vaite izvozvo. Zuva iri rakaitwa muna 274 AD nemubati weRoma yechipegani Aurelian kuti vapemberere kuzvarwa kwamwari wavo wezuva, Sol Invictus. MaKristu achibva ashongedza muti wakaroverwa nembambo nenzira imwechete yakaitwa nemapegani. Asi Jeremia akatiudza kuti hatifaniri kutevedzera tsika dzemapegani. Asi tinongozviita zvakadaro.
JEREMIA 10:2 Zvanzi naJEHOVA , "Regai kudzidza tsika dzamarudzi avanhu, musavhunduswa nezviratidzo zvokudenga; nokuti marudzi avanhu anovhunduswa nazvo.
(Tarirai zviratidzi zvedenga, zviratidzo zvenyeredzi. Kushopera ramangwana renyu kubva panyeredzi dzedenga. Zvinyorwa zveizvi ndizvo zvinoverengwa zvakanyanya panyika, sezvo “nyeredzi dzenyu dzachinyanga” dzinoonekwa mumapepanhau ese nemamagazini. Mifungo yevanhu yakachenjera iyi yakatangwa muBabironi. Asi hatifaniri kuzviita nekuti zvakabva kumapegani. Asi maKristu achiri kuverenga zvichavawira kubva munyeredzi dzavo zvakadaro.)
JEREMIA 10:3 Nokuti tsika dzavanhu hadzina maturo; nokuti mumwe unotema muti mudondo, riri basa ramaoko omunhu unoveza nedemo.
Zuva pfupi zvakanyanya riri pakati pemusi wa 21 Zvita na 23 Zvita, zvichienderana nekuti nyika inenge ichitenderera sei. Mumashure maizvozvo zuva rinobva ratanga kureba zvakare saka mapegani anobva apemberera kuzvarwa kwamwari wezuva nemuti wakashongedzwa.
Hatifaniri kuita izvi ndizvo zvinotaura Jeremia. Asi muti wakashongedzwa ndiwo unokosheswa kwazvo pamhemberero dzese dzeKisimusi, izvozvi ndidzo mhemberero huru dzinoitwa pagore rega rega nemaKristu.
Tinenge takuda zvipo zveKisimusi, zvinodiwa nevana, saka tinobva tapihwa mufananidzo wevazivi vachipa Jesu zvipo muchidyiro.
Asi vazivi vakatevera nyeredzi vakanopinda mumba kwete muchidyiro. Saka hakuna zvipo zvaakapihwa musi waakazvarwa. Idzi inhau dzekunyepa.
Aive asisiri rusvava, aive ava mwana muduku. Josefa aive asipo uye vafudzi vaive vasipo.
Asi maKristu anoyananisa nyeredzi nekuzvarwa kwaJesu muchidyiro. Asi Amosi akataura pamusoro pevamwari venhema.
Amosi 5:26 Zvirokwazvo, makatakura Sikuti mambo wenyu, neKijuni zvifananidzo zvenyu, iyo nyeredzi yamwari wenyu, wamakazviitira.
Saka maKristu anoisa nyeredzi pamusoro-soro pemuti weKisimusi. Hakuna nyeredzi yakatungamirira munhu kuenda muchidyiro. Vatumwa vaifanira kuudza vafudzi vaive pedyo nekwakazvarirwa Jesu kuti vanomuwana kupi.
Saka maKristu anotya Jesu saMwari, asi zvakadaro vanoita zvinamato zvavo zvavanoda vachishandisa mazano echipegani.
II MADZIMAMBO 17:33 Vakatya JEHOVA, vakashumira vamwari vavo, vachitevera tsika dzendudzi kwavakanga vatapwako.
Zvinhu hazvisati zvashanduka. MaKristu nhasi achiri kufadzwa netsika dzechipegani.
VAGARATIA 4:9 Asi zvino, zvamunoziva Mwari, zvikuru zvamunozikamwa naMwari modzokerazve seiko kune zvokuvamba zvisine simba, zvovurombo, muchida zve kutanga kuva varanda vazvo?
Varanda vezvitendero zvechipegani. Pauro aive asina chokwadi chekuti maKristu aya aiziva Mwari. Mwari aivaziva sezvo achiziva zvinhu zvese. Asi kana maKristu achinamata zvitendero zvechipegani, vanenge vachiziva Mwari here?
VAGARATIA 4:10 Munochengeta misi nemwedzi, nenguva namakore.
Zuva rechi 25. Mwedzi waZvita. Nguva yeKisimusi. Gore rega rega. MaKristu anozadzisa chimwe nechimwe chakadzidzwa nekereke pamusoro penguva kubva kumhemberero dzemapegani. Asi nguva yakangosikwa senzvimbo yechina yetorongo yekuchengetera Satani nemadhimoni ake muhuranda. Izvozvi kereke yakabatwa muhuranda netsika dzechipegani dzine zita raJesu rakanamira padziri.
Hapana muBhaibheri patakanzi tipemberere kuzvarwa kwaJesu. Asi takadziita mhemberero huru dzechiKristu pagore.
VAGARATIA 4:11 Ndinotya pamsoro penyu, kuti zvimwe ndakabate-basa kwamuri pasina.
Rudzi rwechipegani “chakaitwa chiKristu” chakaita kuti Pauro atye kuti akatambisa nguva yake pavanhu ivavo. Zvavaitenda zvaive musanganiswa wechiKristu nechipegani uye aive asina chokwadi chekuti vaizokunda here kukwira kuDenga.
MaKristu nhasi ari mugwa rimwechete iri.
Muna 1932 vanhu vekuJapani vakavimbisa hondo pamusoro peManchuria vakatanga kubhomba maguta aive nevanhurume, vakadzi nevana. Mutungamiri wenyika Roosevelt akavamhura achiti vaita chigandanga. Pakupera kwehondo America nemabhomba ayo emoto yaive yabhomba maguta eJapani anosvika makumi matamhatu ikadonhedzera mabhomba eAtomi maviri paHiroshima neNagasaki akanyangaritsa varume vakadzi nevana. Rimwechete remabhomba aya rakawira pachipatara. Nagasaki ndiro guta raive namaKristu akawanda pamaguta ese eJapani, vakabva vaparadzwa nemasaisai ebhomba iri, bhora remoto raipisa kudarika zuva, nekuita kwekufamba kwaro kwaiuraya. Zvese izvi zvakabva kuhama dzechiKristu kuAmerica.
Vanhu vakashanduka kuva vari nani here kubva pamazuva eTestamente Yekare.
Hitira akauraya vanhurume, vakadzi nevana vechiJuda vanosvika mamiriyoni matanhatu nevamwe mamiriyoni matanhatu vaive vasiri maJuda paakatanga muenzaniso wekuuraya kukuru. Britain yakakandira mabhomba emoto paDresden neHamburg. Vakamirira kwemaawa mashomanana vakakandira zvakare mamwe mabhomba. Nenzira iyoyo vaikwanisa kuparadza vese vaibatsira nevehutano vaiedza kubatsira vaive vakuvara. Tisingatauri kushandisa kwavakaita chigadzirwa chaive chakaita kunge mafuta chaierera nepasi chichitsva nekubatsira kukuchidzira zvaitsva kuti chiyerere chichipinda nemese maive makavanda vanhu. Asi vakakunda muhondo saka vaive vasiri vapari vemhosva munezvehondo.
Kuverengwa kwevarume vakadzi nevana vakafa pakurwa kweStalingrad muHondo yePasi rese yechipiri kwaida kusvika kumiriyoni rimwechete nehafu.
Saka isu vanhu vanhasi tine musiyano nemaJuda aive nehutsinye akaparadza vanhu vemuParesitina here?
Gore 1900 risati rasvika vanhu vaikuvara muhondo vaive mauto kwete vanhuwo zvavo. Mumashure megore 1900 vanhu vaikuvara vazhinji muhondo vaive vanhuwo zvavo vasina mhosva. Vanhu vemazuva ano vauraya vana vakawandisa kudarika vakabvira vauraiwa nemaJuda emuTestamente Yekare. Zvichienzaniswa nevanhu 200 miriyoni vakauraiwa mudzihondo pakati pegore 1900 negore 2000, maJuda eTestamente Yekare vaive vasina chavakaita. Rudo rwekuuraya runoita serwakarukirirwa mukodzero dzevanhu dzekuita zvavanoda.
Hushe hweBritain hwakaita mari muIndia nekutakura mamiriyoni ematani ezvirimwa vachiendesa kuEngland kuti Britain ipfume. Nzara payakazorova India, maIndia anosvika 30 miriyoni akafa nenzara totenda kuita kwezvekutengeserana uku mukati memakore 200 eyaidaidzwa kuti Brithish Raj. Kubva mugore 1947 India yaive nekuzvitonga kuzere uye kwaive kusina nhorondo yenzara zvisinei nezvipingaidzo nekukanganisa kwaiwanikwa.
Kana isu vanhu vanhasi tikapomera vanhu veTestamente Yekare kuti vaive nehutsinye, chinova chokwadi, ngatirangarirei kuti tine ropa rakawandisa mumaoko medu kudarika zvavakabvira vaita ivo.
Saka Mwari paakatanga kushanda nevanhu vaive vakazara zvivi aiziva kuti hunhu hwevanhu hwaisazoshanduka uye kuti vanhu vaizouraya vachirarama neropa kana rudzi rwevanhu rwuchiri panyika.
Mwari aizivawo kuti maJuda aizotorawo zvivi zvese zvemapegani vaigara muNyika yeChipikirwa. Saka akaudza maJuda kuti vaparadze mapegani.
Vana vakakuriswa nemapegani vaizokura kuva nehutsinye uye kuva nechipegani mavari sevabereki vavo.
Vana vanokurira munyika dzechiMosiremu vanokura vova maMosiremu sevabereki vavo.
Vana vechiHindu vanokura voita maHindu.
Vana vevasingatendi vanokurawo vova vasingatendi.
DEUTERONOMIO 18:9 "Zvino kana wasvika munyika yaunopiwa naJEHOVA Mwari wako, usadzidza kutevera zvinonyangadza zvendudzi idzo.
Vanhu ava vaive vasingori mapegani. Vainyangadzawo zvakare.
Kukandira vana vavo mumoto sechiratidzo chekunamata kwavo. Zvakaipa kwazvo. Vachinyengerwa nemadhimoni aizviti vamwari uye zvifananidzo.
2 MADZIMAMBO 3:26 Zvino mambo waMoabhu wakati achiona kuti wakundwa pakurwa, akatora varume vana mazana manomwe vaigona kurwa nomunondo, akaidza kupasanura kuna mambo waEdhomu; asi vakanga vasingagoni.
27 Ipapo akatora mwanakomana wake wedangwe, waifanira kumutevera paushe, akamubayira chive chipiriso chinopiswa pamusoro porusvingo. Ipapo vaIsiraeri vakatsamwa kwazvo, vakabva kwaari, vakadzokera kunyika yavo.
Kuti akunde muhondo akapisa mwanakomana wake mukuru ari mupenyu. Zvaive zvakaipa kwazvo. Vabereki vakanaka chaivo vanopira hupenyu hwavo kuti vararamise vana vavo.
2 MADZIMAMBO 16:2 Ahazi akatanga kubata ushe ava namakore makumi maviri; akabata ushe paJerusarema makore ane gumi namatanhatu. Asi haana kuita zvakarurama pamberi paJEHOVA Mwari wake, sababa vake Davidi.
3 Nokuti wakafamba nenzira yamadzibaba aIsiraeri, akapinzawo mwanakomana wake mumoto netsika dzezvinonyangadza zvavahedheni, vakanga vadzingwa naJEHOVA pamberi pavana vaIsiraeri.
Mwari akaparadza mapegani aive muNyika yeChipikirwa kuti maJuda atange patsva zvakachena. Asi maJuda akabva atanga kutevedzera manamatiro emapegani, sezvinoita maKristu neKisimusi neTiriniti nezvitendero zvemukereke nemaIsita egi, nemabhanzi emuchinjikwa anopisa uye ... (mutsetse wezvinhu zvacho wakakurisa).
Mwari aiziva kuti zvitendero zvemapegani zvaizosvibisa zvokurira vanhu vake.
2 MADZIMAMBO 17:16 Vakasiya mirairo yose yaJEHOVA Mwari wavo, vakazviitira zvifananidzo zvakaumbwa, zvemhuru mbiri; vakaitawo matanda okunamata nawo, vakanamata hondo yose yokudenga, vakashumira Bhaari.
17 Vakapinza vanakomana navakunda vavo mumoto, vakauka nokuita uroyi hwavo, vakazvitengesa kuti vaite zvakaipa pamberi paJEHOVA, vakamutsamwisa.
2 MADZIMAMBO 21:6 Akapinza mwanakomana wake mumoto, akatenda mashura, akaita mazango, akagadza masvikiro navauki; akaita zvakaipa zvizhinji pamberi paJEHOVA, ndokumutsamwisa nazvo.
2 MAKORONIKE 28:1 Ahazi akanga ana makore makumi maviri pakutanga kwake kubata ushe; akabata ushe paJerusarema makore gumi namatanhatu; asi haana kuita zvakarurama pamberi paJEHOVA, sababa vake Davidi;
2 Asi wakafamba nenzira dzamadzibaba aIsiraeri, akaitira vaBhaariwo zvifananidzo zvendarira yakanyauswa.
3 Uye akapisawo zvinonhuwira pamupata womwanakomana waHinomi, akapisa vana vake mumoto, sezvainyangadza zvavahedheni, vakanga vadzingwa naJEHOVA pamberi pavana vaIsiraeri.
Zvitendero zvechipegani zvaive zvakurira maJuda.
MAPISAREMA 106:37 Zvirokwazvo, vakabayira mweya yakaipa vanakomana vavo navanasikana vavo,
38 Vakateura ropa risina mhosva, iro ravanakomana vavo navanasikana vavo, Vakavabayira zvifananidzo zveKanani; Nyika ikasvibiswa neropa.
JEREMIA 7:30 "Nokuti vana vaJudha vakaita zvakaipa pamberi pangu, vakaisa zvinonyangadza zvavo muimba pakadanwa zita rangu, kuti vaisvibise ndizvo zvinotaura JEHOVA.
31 Vakavaka nzvimbo dzakakwirira dzeTofeti, dziri mumupata womwanakomana waHinomi, kuti vapise vanakomana navanasikana vavo mumoto, zviri zvinhu zvandisina kuvaraira, kana kufunga mumoyo mangu.
JEREMIA 19:2 Ipapo uende kumupata womwanakomana waHinomi, uripo pavanopinda pasuwo rezvaenga zvehari uparidzirepo mashoko andichakuudza;
3 uti, ‘Inzwa shoko raJEHOVA, imi madzimambo aJudha navagere Jerusarema,' zvanzi naJEHOVA wehondo, Mwari waIsiraeri, `Tarirai, ndichauyisa zvakaipa pamusoro penzvimbo ino, nzeve dzomumwe nomumwe unozvinzwa dzichawunga.
4 Nokuti vakandisiya, vakashandura nzvimbo ino, vakapisirapo zvinonhuwira kuna vamwe vamwari vavakanga vasingazivi, ivo namadzibaba avo namadzimambo aJudha, vakazadza nzvimbo ino neropa ravasina mhosva,
5 vakavaka nzvimbo dzakakwirira dzaBhaari, kuti vapisire Bhaari vanakomana vavo pamoto zvive zvipiriso zvinomupisirwa; izvo, zvandisina kuvaraira, kana kuzvitaura, zvandisina kufunga mumoyo mangu.'
EZEKIERI 23:37 "Nokuti wakafeva, ropa riri pamaoko avo; wakafeva nezvifananidzo zvavo; vakapinzawo vanakomana vavo vavakandiberekera mumoto, kuti zvidyiwe nazvo.
38 Vakandiitirawo chinhu ichi, vakasvibisawo nzvimbo yangu tsvene nezuva iro, vakamhura maSabata angu.
39 "Nokuti vakati vabayira zvifananidzo zvavo vana vavo, vakapinda nezuva iro munzvimbo yangu tsvene kuti vaimhure; tarirai, ndizvo zvavakaita mukati meimba yangu.
Rudzi rwevanhu haruna tariro.
Mwari akapa maJuda mirairo yekurarama nayo nezvibairo zvemuTembere kuti varipire zvivi zvavo. Uku ndiko kwega kutenda kweTestamente yekare kwaipa vanhu chiremera. Kwaive kusina zvifeve zvemutembere. Kusina kuuraiwa kwevana. Kusina kutadza mune zvepabonde.
Akavaudza kuti vauraye mapegani ese aive muNyika yeChipikirwa kuti vatange patsva zvakanaka uye kuti vasan’oreswe.
Asi munozivei? MaJuda vaitofadzwa netsika dzemapegani dzaive dzakaipa.
MuTestamente Yekare vanhu vaitakura zvivi zvavo. Kana vaive mapegani vasingateveri zvaive zvakanyorwa muTestamente yekare kuti varipire zvivi zvavo, Mwari aivaona sevatadzi vasina kutendeuka. Nekuti Mwari akavenga chivi, aifanira kuparadza vatadzi.
Sezvazvaive mazuva aNoa, vanhu vaingotadza vachiramba chokwadi chaiparidzwa naNoa. Kuti aparadze zvivi Mwari aive asina imwe sarudzo asi kuparadza vatadzi. Saka vese vakanyura nekuti vakaramba nzira imwechete yavaifanira kubuda nayo kubva pakuparadzwa neMvura zhinji, nzira yacho yaive kuvaka nekupinda muareka.
Izvi zvinoratidza kuita kwevanhu kunova kwekurwisana nezvinodiwa kwavari naMwari. Munhu angoripo pakuramba kuda kwaMwari.
Mutungamiri wenyika Trump paakasarudza kuzadzisa kuita Jerusarema Guta guru reIsraeri kuri kuzadzisawo chiprofita, sarudzo dzaimupikisa mumubatanidzwa wenyika dzepasi rese weUN dzaive 128 kusararudzo 9 rutivi rwake rwuri ndirwo rwaive rwakakurirwa. Vachisarudza vachipikisana nevanhu vaMwari maJuda. Vakasarudza vachipikisa kuonekwa kweJerusarema seguta guru renyika yakapihwa Abrahama naMwari. Saka dzese nyika dzinonzi ndedzechiKristu muEurope neCanada vari kupikisana naMwari uye vari kuedza kumisa kuti zviprofita zvizadziswe.
Negore 2018 nyika zhinji dzaive dzatora vapoteri vanosvika mamiriyoni makumi maviri nemaviri vaive vatiza mhirizhonga munyika dzavo. Asi kubva muna 1948 nyika idzodzo hadzina kubvira dzagamuchira vapoteri vekuParesitina mamiriyoni maviri vaive muGaza. Vanosiiwa sechiratidzo chekupikisa kutora kuri kuita maJuda nyika yechipikirwa yakapihwa kuna Abrahama. Ndiko kuita kwehupikisi hwenyika ichipikisa kuda kwaMwari. Zvisinei nezvakaprofitwa zvekuti maJuda achaunganidzwa zvakare.
Saka isu vanhu vanhasi tinofarira kuda kwaMwari here? Kwete nepaduku pose. Tine kuda kwedu kwakatikoshera.
Nguva yakadarika Mwari akaparadza rudzi rwevanhu rwuzere zvivi nemvura. Nguva inouya achavaparadza nemoto.
Kana asvika pakubvisa zvivi, Mwari haana tsitsi.
Kana mukatakura zvivi zvenyu mega munofira zvivi zvenyu mega. Murairo waMwari akatarisana nezvivi hauna tsitsi zvachose semurairo wefizikisi unotaura kuti kana ukaisa ruwoko rwako mumoto kwenguva yakareba unotsva.
Nzira imwe yamungabude nayo ndeyekutsvaga Munhu asina mhosva anokwanisa kukutakurirai zvivi zvenyu. Kana munhu iyeye arine zvivi, anokwanisa kutakura zvivi zvake iye pachake chete.
Zvino munhu uyu anofanira kufira zvivi zvenyu panzimbo penyu.
Murairo waMwari usina tsitsi unoti ropa risina mhosva chete ndiro rinokwanisa kuripira zvivi.
Saka tinoda munhu akarurama kuti aripire muripo wezvivi zvedu.
Kune imwe mirairo yevanhu inofanira kutererwa.
Mitemo yemumigwagwa inofanira kutererwa. Kupindira imwe motokari panzvimbo yakavanda kwakaipa unokwanisa kunorovana nemotokari inobva mberi kwako. Munokwanisa henyu kuva nerombo rakanaka dzimwe nguva mukabudirira. Saka isu vanhu tinofunga kuti takachenjera kana tikatyora mutemo tikasarangwa. Asi tinenge tichiisawo motokari dzinobva mberi kwedu panjodzi, izvi hazvina kuchenjera zvachose.
Tinobva taita hunhu humwechete uhu paMurairo waMwari. Ndinokwanisa kutyora murairo waMwari ndoshaiwa murango. Ichokwadi here?
Mwari anoziva kuti mune bvudzi ngani mumusoro menyu. Akanyorawo pasi zvese zvamakaita kana zvaive mundangariro dzenyu zvakaipa. Zuva rekutongwa rakakumirirai kunyangwe kana makabudirira kwazviri panyika pano.
Nekuda kwemurairo tinofanira kudzivirirwa kubva kune zvimwe zvirwere. Munokwanisa kupona musina kudzivirirwa asi vanhu vazhinji vakafa nechirwere ichocho zvakaita kuti kunzi vanhu vanofanira kudzivirirwa. Nekurarama musina kudzivirirwa munokwanisa kuchengeta chirwere mamuri zviri nyore kuti chitange kupararira patsva pachinzvimbo chekuti chipedzwe zviri nyore. Saka tinofanira kudzivirirwa kuitira vamwe vakatipoteredza.
Kana tikabudirira pakuita chakaipa tinobva taita kuti chivi chirambe chiri chipenyu, uye chinokwanisa kupararira kuenda kune vamwe vanotevera muenzaniso wedu pakurarama kwavo.
Tinopisa mafuta akawandisa uye tinorasira mweya wekabhoni dhayokisaidhi wakawandisa muchadenga. Kukanganisika kwemamiriro ekunze kuri kuitika nyika ichienda panjodzi. Saka tinodzidza kuti hatikwanisi kungorarama zvatinoda nekuti maitiro edu mazhinji acho anokuvadza nyika nenzvimbo dzatigere. MaTaribani akatora Afghanistan vakatengesa nzvimbo dzayo dzinosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana kuti vawane mari nekukasika kubva kuvanhu vekuJapani. Makaro ekuda kuzviunganidzira, vanhu vanosarudza kuita pfuma yenguva duku. Zvikamu makumi masere kubva muzana emasango epasi rino akatemerwa pasi. Kuita uku hakugoni kuenderera mberi kwakadaro. Kurasa hunyoro nemweya kunoitwa nemiti mumasango kunobatsira kwazvo pakunaya kwemvura. Nyika dzakapfuma dziri kuedza kwazvo kuti dzidyare miti dziite masango zvakare. Nyika dzevarombo dziri kuramba dzichimatemera pasi.
Kutema miti mumasango kunoitisa kuti mvura inaye shoma uye magwenga apararire negukuravhu. Pasi rese magwenga ari kukura, kunze kwemuIsraeri. Paresitina yaive nyika yaive isingakure chinhu kwemakore anoda kusvika 2000. Zvino nekuti maJuda, varidzi venyika iyi vechokwadi vakadzoka kwairi, Paresitina yakuyevedza kunge ruva. Nyika irikufarira vanhu vayakapihwa naMwari. Vanhu veOttoman Turks pavakagaramo kwemakore anoda kusvika 400 nyika iyi yaive isina zvibereko zvaikura mairi. Vaive vagari vasiri pamutemo vakangouya vakatanga kutonga nekuti mauto avo aive akasimba kwazvo.
Mishonga yemazuva ano iri kuparadza muchadenga munodaidzwa kuti ozone layer makiromita makumi maviri kusvika makumi matatu kumusoro kudenga. Kurova kwezuva kuri kubva kwawedzera kunosvikokonzeresa gomarara reganda uye kuderera kwegoho pazvirimwa zvedu.
Taifunga kuti tinokwanisa kugadzira mishonga yakakosha iyi asi taisaziva kuti yaizokanganisa mamiriro ezvinhu munzvimbo dzedu nepasi rino rese.
Chikamu chimwechete kubva muzana chepasi rino ndiyo mvura yakanaka kumwa. Mvura yakawandisa yacho iri mumakungwa uko vanhu vashoma kwazvo vanokwanisa kusvikako. Saka chikamu chimwechete muzvikamu zvitatu zvevanhu vepasi rino ndivo vanokwanisa kuwana mvura yakachena. Asi kushandiswa kwemafetireza, mishonga yezvipfukuto, masuweji netsvina yemumaindasitiri zviri kusvibisa mvura shoma yakanaka kunwa yatinayo panyika.
Kuwedzerawo kwekushaikwa kwemvura yakachena inonwika kunorevawo kuti hupenyu hwedu hwemazuva ano haugoni kuenda mberi zvakanaka.
Hafu yenzvimbo dzepasi rese dzemapani dzine mvura dzakaparara. Asi basa radzo guru raive rekunatsa mvura yekunwa neinoshandiswa nevanhu mazuva ose.
Dambudziko revanhu guru ndidzo kodzero dzekuzvisarudzira, dzakabatanidzwa nematorero atinozviita (chimiro chemunhu) zvinotiita kuti tifunge kuti takachenjera.
Izvi zvinoita kuti tifunge kuti tinokwaisa kuita zvatinoda, mukuita izvi tinozviparira matambudziko enguva inouya. Sainzi dzedu dzatinovimba nadzo ndiyo mishonga sezvo ichirapa vanorwara ichiita kuti vanhu vararame nguva yakati rebei asi izvi zvaita kuti nyika ive nevanhu vakawandisa rava dambudziko gurusa parizvino.
Kumanikidzika kwekuwandisa kwevanhu kunoreva kuti vanhu vawandisa asi vese vachimhanyisana nezviwanikwa zvishoma kwazvo.
Shanduko imwechete hurusa pachiso chenyika musenturi yakadarika kuwedzera kwekukura kwedzimba dzematangwena dziri munzvimbo dzakapoteredza maguta. Chikamu chimwechete muzvitatu zvevanhu chiri kurarama munhamo inotyisa.
Kusaenzana munyaya dzezvehupfumi kunokatyamadza kwazvo. Kana tikasanganisa pamwechete mari yese yevarombo vese vanoumba hafu yehuwandu hwevanhu vepasi rese kunoburitsa mari yakaenzana nemari ine vanhu zana vakapfumisisa pasi pano.
Chikamu chimwechete kubva muzana chevanhu vese vepasi pano ndicho chine hafu yepfuma yepasi rese.
Saka mazana emamiriyoni evanhu havagoni zvachose kuwana mugove wezvipo zvekushanda kwavo nesimba kwehupenyu hwavo hwese.
Saka isu vanhu hatina kukwanira zvachose kubata pasi rino nenzira inoitira zvakanaka vanhu vose.
Hongu. Kuuraiwa kwevanhu muTestamente Yekare kwaive nehutsinye.
Asi ngatitarisei hutsinye husingaperi murudo rune vanhu rwekuuraya vamwe vanhu.
Hondo dzevanhu. Senturi rakadarika vanhu vanosvika mamiriyoni mazana maviri vakauraiwa muhondo.
Nekukura kwetekinoroji, takava vaurayi vari nani.
Germany ndiyo yaive nyika yainyanya kutevera tsika muEurope asi yakaramba iine ruvengo rwakadzama nemaJuda ikauraya maJuda mamiriyoni matanhatu muhorokasiti. Uku ndiko kwaive kuuraya kukuru kwekutanga. Kwaive kuratidzirwa kwenguva yeKutambudzika kukuru, yambiro yekutiudza kuti nguva yekutambudzika iri kuuya ichange yakadii.
Chinhu chinosuwisa. Vanhu vakagara vachida kuurayana munhorondo yevanhu yese. Hosha, nzara, zvirwere, nezvimwe zvakadaro. Teverai hondo dzese mobatanidza huwandu hwevanhu vanofa.
Hondo yaHitira yakauraya vanhu vanosvika mamiriyoni makumi matanhatu.
Moa Tse Tung akauraya vanhu vakawanda saizvozvo zvakare mukutonga kwake kwehutsinye muChina.
Stalin akauraya vanhu vanosvika mamiriyoni makumi mana muRussia.
Asi vemakambani efodya vanoonekwawo varinemhosva yekufa kwevanhu mamiriyoni zana (kusvika parizvino). Tingati ndiyo muurayi mukurusa wenguva dzese.
Saka vanobhema vanobhadhara mari kuti vafe. Izvi zvakangofanana nekuzviuraya. Inzira yekusafunga zvakanaka iri muvazhinji.
Hutonga hunouraya vanhu miriyoni rimwechete gore rega rega. Zvisinei nekuedza kwedu kukuru, aka ndiko kapuka kamwechete katisati tagona kubvisa muhupenyu hwevanhu. Parizvino, hutonga ndihwo muurayi mukuru panyika.
Vanhu vanofunga kuti vanoziva zvavari kuita, asi vanhu vakawandisa vari kukurirwa nekapuka kaduku – duku kudarika zvavanoitwa nezvimwe zvipuka zvese.
Kunyange hutachiona hwemukondombera huchiuraya zvakare saizvozvo.
Tiri kudzidza zvishoma nezvishoma miganhu yesainzi. Thomas Midgley akagadzira peturu ine huturu kwazvo uye CFC inoparadza muchadenga. Zvigadzirwa zvake zvaive zvakanakisa zvikatsvaira nyika asi haana kuziva kuti huturu huri muzvigadzirwa zvake hwaizokuvadza muchadenga zvakanyanyisa, kusvikira kuipa ikoko kwakurirwa nekukanganisika kwemuchadenga kwatinodaidza kuti global warming muchirungu. Takagona kubvisa huturu hweridhi hwaive mupeturu izvozvi wava mweya wekabhoni dhayokisaidhi unoburitswa panotsva peturu mumainjini emotokari uri kukonzeresa kuparara kwemuchadenga medu.
Hakuna anoziva kuti vangani vakafa kana vakarwariswa nehuturu hweridhi hwaive muchiutsi chaibuda mupeturu. Kana kuti hatizivi kuti vangani vakafa nekupisisa kwezuva kwakawedzerwa nekukuvadzwa kwakaitwa muchadenga matinodaidza kuti ozone reya.
Tinokwanisa kutanga kushandisa motokari dzemagetsi asi tichikanganwa kuti simba remagetsi rinoshandiswa kufambisa motokari idzodzo rinowanikwa kana chimwe chinhu chapiswa. Saka kabhoni dhayokisaidhi inoramba ichienda muchadenga. Zuva nemhepo zvinongobata zvikamu makumi matatu kubva muzana zvesimba remagetsi. Saka chimwe chinhu chinofanira kutsva kuti chizadzise mukana unenge wasara. Saka tinogadzira mabhatiri ekuchengetera simba iri asi tichikanganwa kuti patsva marasha akawanda sei kuti mabhatiri iwayo avepo. Kugadzira simba remagetsi rakachena kwakaoma zvakanyanya. Uye varombo vanozogona kumatenga here?
Simba remagetsi hariiti kunge richagona kudzivirira kuipa kukuru kwekusvibiswa kwemweya watinofema nemuchadenga.
Nenzira imwechete, simba rezvematongerwo enyika hariiti kunge rinogona kudzivirira kukura kwehuwori.
Vazhinji panyika varombo. Saka kuwanda kwemotokari dzinofamba mumugwagwa kunorevawo kuti zhinji dzacho dzinenge dziri motokari dzepeturu dzakachipa.
Vanhu havagoni kufanoona zvakaipa zvinokonzereswa nezvigadzirwa zvesainzi kusvikira zvakaipa zvacho zvaitika. Makambani makuru vanowana mari kubva pazvigadzirwa izvozvo vanorwisa kwazvo kuti varambe kuti kuipa kwaitika kubva pazvigadzirwa zvavo.
Saka rudzi rwevanhu haruna kukwanira kuita hupenyu hwenguva refu apo munhu wese anenge achiwana zvakafanira.
Kana Mwari aida kuita hushe husingagumi husina zvivi, aifanira kuita basa rekunatsa panyika raizobvisa zvakazara marudzi emapegani muNyika yeChipikirwa.
Tiri kurarama munguva dzakaipa kwazvo.